Tottenham oo FA Cup laga reebay, Roma oo laga yaabsaday, Inter oo guuldaraysatay iyo Barcelona oo guul gaartay
Sunday, June 16th, 2019 - 20:19:20
Sunday January 27, 2019 - 22:27:20 in Wararka by kubadbile news
Crystal Palace ayaa tareenka koobka FA ka freebtay kooxdaTottenham oo lagu tirinayay kooxahaheerka ka gudni kara, waxayna kaga adkaatay 2-0 oo ay kaga mahad celinayso, onnor Wickham iyo Andros Townsend oo qaybta hore u dhaliyay.
Nelson Semedo iyo Leoel Messi ayaa Barcelona ka cawiyay in ay guul garoonkooda kaga soo gaarto kooxdaGirona.
Torino aya hal gool oo ay daqiiqadi 35 ka heshay Armando Izzo uga libin heshay kooxda Inter Milan shanty daqiiqi ee u dambaysay ciyaarta ku dheelaysay 10 laacib kadib markii kaarka casaanka loo taagay cayaaryahan Matteo Politano.
Bayer Munich ayaa 4-1 uga awood sheegatay naadigaSttigart waxaana goolasha u kala dhaliyay cantara , Leon Goretzka, Robert Lewandowski iyo gool uu si kama ‘ah siaga dhaliyay Christian Gentner.
Kooxda Roma oo 3 goolkaga hormartay Atalatanta ayaa laga soo barbareeyay ciyaar cajiib ah oo ka dhacay garoonka kooxda Atalanta, waxaana goolasha oo la hormmartay u kala dhaliyay Eden Dzeko oo laba gool saxiixay iyo Stephan El Shaarawy, waxaase Atalanta usoo barbareeyay Timothy Castagne
Rafael Toloi iyo Duvan Zapata.